Topnepalnews.com | प्रचण्डलाई ओलीको जवाफ-'कस्तो संशोधन ? मौखिकरुपमा सुनेर के गर्ने, हेरौं कागजपत्र'
प्रचण्डलाई ओलीको जवाफ-'कस्तो संशोधन ? मौखिकरुपमा सुनेर के गर्ने, हेरौं कागजपत्र'
Posted on: April 23, 2017 | views: 448
निर्वाचनको बिरोध गर्दै आएको तराई केन्द्रित दलको माग अनुसार चुनाव सानुपर्ने र उनिहरुका माग पुरा गर्न संविधान संशोधन गर्न सघाउन अनुरोध गर्न गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संशोधनको कागज हेरेर मात्र जवाफ दिने भन्दै फर्काइदिएका छन् ।
आफ्नै निवासमा भेट्न आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको भेटपछि ओलीले एमाले माकुराको जालोमा नपर्ने कडा प्रतिक्रिया दिंदै संविधान संशोधन प्रस्तावको कागज हेरेपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने बताए ।
पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले भने-'उहाँहरुले गरेको सहमतिको जानकारी गराउन आउनुभएको रहेछ, हामीसँग परामर्श भएको छैन । हामी हेर्छौं, अध्ययन गर्छौं । समर्थन गर्न लायक कतै भेटियो भने समर्थन गर्छौं । विरोध गर्न लायक, प्रक्रियामा जान दिन मिल्नेसम्म देखियो भने त्यसमा जान दिन्छौं ।'
'देशलाई गम्भीररुपमा अहितै गर्न खोजिएको र संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ठाउँमा संविधानै भाँचकुच गर्न खोजिएको पाइयो भने त्यसमा हामीले रोकावट गर्नुपर्ने हुन्छ । मौखिकरुपमा सुनेर के गर्ने, हेरौं कागजपत्र ।' ओलीले भने-'कस्तो संशोधन गर्ने रु जे ल्याए पनि समर्थन गर्छौं भनेको थियो र कहिल्यै रु होइन । वहाँहरुले अघिल्लो संविधान संशोधनको प्रस्ताव गलत, अनुपयुक्त ल्याउनुभएको थियो । हामीले धेरै समय भन्यौं । अलि समय जिद्दी गर्नु भो । पछि गलतै रहेछ, यो हामी फिर्ता लिन्छौं भन्नुभो । फिर्ता लिएर राम्रै गर्नुभो । अब अहिले कस्तो ल्याएको छ, हेर्नुपर्छ । त्यो हेर्नुपर्छ । स्थानीय तहको कहाँ बढाउने भनेको छ, किन बढाउने रु कसले माग गर्‍यो, कसले जिद्दी गर्‍यो ।'
ओलीले आफुहरु चुनावको पक्षमा रहेको भन्दै निर्वाचनको संघारमा बजेट जारी गरेर सरकारले चुनाव प्रभावित पार्न खोजेको बताए । उनले भने-'हामी चुनावको पक्षमा छौं । तर, जेठ १५ गते बजेट जारी हुन्छ, अनि हप्ता १५ दिनपछि चुनाव गर्ने । त्यो वीचमा चाहिँ चुनाव प्रचारका लागि बजेटमा थुप्रै कुराहरु राख्ने प्रचारका कुरा, अनि त्यही कुरा लिएर चुनावमा जाने जस्ता कुराहरु चाहिँ स्वीकार्य हुँदैनन् ।
हीन ग्रन्थीबाट एमाले चल्दैन । कमजोर मनोग्रन्थीबाट चल्दैन । यसो भन्लान् कि, उसो भन्लान् कि ? हामी देशको हितका निम्ति, देशको हितको पक्षमा दृढताका साथ उभिन्छौं । एमाले त्यस्तो अप्ठ्यारोमा पर्‍यो भन्ने‘ हुन्छ नि यसो जालसाजी दुईटा कुरा, त्यस्ता कुराहरुको धरापमा एमाले पर्दैन । माकुराको जालोमा झिँगामात्रै पर्छ ।
तर, एउटा के भने हामी सशंकित छौं । किन सशंकित छौं भने उहाँहरुले हामीसँग विषयमा दफावार किन छलफल गर्न आँट गर्नुभएन ?'